ကမ္ဘာကျော်တော့မယ့် အဆိုတော် ကျားပေါက် Big Bag – Tameelay
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် Band တစ်ခုဖြစ်သလို ပရိသတ်အများစုရဲ့ လေးစားချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ ကိုကျားပေါက်ရဲ့ Big Bag Band ဟာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲကိုရောက်စေတဲ့ သီချင်းတော်တော်များများနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ယခုတစ်ခါမှာလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စတစ်ခု အခွင့်အရေးတစ်ခုကို Big Bag Band က ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
Big Bag Band ဟာ ကမ္ဘာကျော် Rock Legend Band ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Queen” ရဲ့ မန်နေဂျာ Jim Beach ရဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ project အခွေမှာ သီချင်းဆိုဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှု ပြုခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုစာမျက်နှာမှာတော့ ယခုလို ရေးသားပြီး ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“Queen” အဖွဲ့ရဲ့ Manager Jim Beach နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
ကျတော်ဒီနေ့ညနေ ၃နာရီလောက်က Jim Beach နဲ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Jim Beach ဟာ ၁၉၇၀ လောက်ထဲက Queen ရော Freddy Mercury အတွက်ရော manager လုပ်ပေးခဲ့တာအခုထိပါပဲ။
အခုတွေ့ဖြစ်တာ Jim ရဲ့ project “NewYork City” အတွက်ပါ။ New York City ဆိုတဲ့သီချင်းကို ကမ္ဘာအနှံ့က artists တွေက တနိုင်ငံတပုဒ် ဖန်တီးကြပြီး worldwide ဖြန့်မှာပါ။ အဲဒီ project အတွက် ကျနော်တို့ BigBag ပါဝင်ဖို့ Jim ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလဲ ကျနော် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Asia က လောလောဆယ် ဂျပန် ရယ် မြန်မာရယ် ပါပါမယ်။
ဆက်ပြီး နောက်တပါတ်ကြရင် Jim နဲ့တွေ့မယ့် Brian May (lead guitarist of Queen) အတွက် bigbag album တွေထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Brian ကိုဆက်ဆက်ပေးပေးပါမယ်ပြောပါတယ်။ CD ထဲမှာ Dear Sir Brian May, We’ve never met yet you taught me everything “ လို့ကျနော့်လက်ရေးနဲ့ရေးပေးခွင့်ရလိုက်တယ်။
Artist တယောက်ဖြစ်ရတာရော BigBag ဖြစ်ရတာရော
Thanksalot Anne And Max for bringing me the best news!! Partyyyyyyy!!!!!!” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ Myanmarload ကလည်း ကိုကျားပေါက်အတွက် အတိုင်းမသိ ဝမ်းသားဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော်.
ပရိသတ်တွေကို မျက်လုံးပြူး အံ့သြသွားစေတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေး မေပြည့်စုံအောင် ရဲ့ အင်စတာဂရန်မှ ပုံများ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လေယာဉ်မှူး အမိုက်စားလေးဆိုပြီး အမျိုးသားပရိသတ်တွေ အသေအလဲကြွေခဲ့ကြတဲ့ လေယာဉ်မှူးမလေး မေပြည့်စုံအောင် ဟာ သူမရဲ့ အင်စတာဂရန် မှာ ပရိသတ်တွေ ထင်မထား လောက်တဲ့ ပုံတွေ ကို ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အင်စတာဂရန်မှ ပရိသတ်တွေအရမ်းကို အံ့အားသင့်သွား ရလောက်အောင်ပါဘဲ။ သူမဟာ …
အုပ်စိုးခန့် နဲ့ သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်းတို့ တွဲနေကြတာလားဆိုတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကြောင့်လည်း မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ ယွန်းယွန်းဘက်ကို အားနာရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ သီးသန့် အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ” ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ပြောကြတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ မိန်းကလေးဘက်ကို အားနာတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ကတော့ …
ဆိုက်ကားနင်း၊ ထမင်းကြော်ရောင်း ခဲ့တဲ့ဘ၀ကို မမေ့ဘူးဆိုတဲ့‘ ခင်လှိုင်’
ကိုခင်လှိုင်ဟာ လက်ရှိ အနုပညာ အသိုက်အဝန်းမှာ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အပြင် ပရိသတ်တွေ အားပေးမှု အများအပြား ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အရင်တုန်းကအချိန်တွေမှာလဲ ဘဝအတွက် အမှတ်တရတွေ များစွာ ရှိနေခဲ့ပြီး ဘဝမျိုးစုံကိုလည်းဖြတ်ကျော်ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီ ခါးသီးတဲ့ ဘဝတွေ …